THEOBROMA "CACAO" - အပိုင်း ၁ ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
THEOBROMA "CACAO" - အပိုင်း ၁
Theobroma Cacao ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကနေ ကမ္ဘာမှာ အရသာရှိလှတဲ့ ချောကလက်ဆိုတာကို ရစေတယ်။ လူတိုင်းသိကြတာက Cacao (ကာကာအို) ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကနေရတဲ့ cacao အစေ့ကလေးတွေက (တခါတရံ cocoa bean လို့ လည်းခေါ်ပါတယ်) ချောကလက်ကိုရစေတယ်လို့ပါ။
Theobroma ဆိုတာ ဂရိစကားလုံးဖြစ်ပြီး “ဘုရားသခင်၏ စားစရာ” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ဒီသစ်ပင်တွေရဲ့ ကနဦးအစကတော့ တောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့ Amazon Region ကပါတဲ့ ...
ဘီစီ 1000 လောက်တုန်းကတော့ ဒီ Cacao beans တွေဟာ စားသုံးရာမှာအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်၊ နောက်ပိုင်း ဘီစီ 1000 ကျော်တော့ Mayan နဲ့ Aztec ဆိုတဲ့ Mexico မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်လူမျိုးစုတွေဟာ cacao ကို သောက်စရာ အဖြစ်သုံးဆောင်လာခဲ့ကြတယ်၊ Mayan လူမျိုးတွေရဲ့ ဘုရားဝတ်ပြုပွဲနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေမှာ cacao ကိုသောက်သုံး ခြင်းဟာ အထူးအရေးကြီးတဲ့ အစဉ်လာတစ်ရပ်အဖြစ်ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။ Cacao ဟာ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန် စေတယ်လို့လည်း ယုံကြည်ကြတယ်။
Most studies agree that the Maya were the first people to discover the secret of "cacao". They grew it in their own backyards, and harvested, fermented, roasted, and ground the seeds intoapaste, from which they preparedafrothy, bitter drink.
The Maya drank chocolate asafrothy, hot and bitter drink, according to the following 2,000 year old recipe:1. Mix the cacao paste with water2 Add spices such as chilli peppers and cornmeal3. Pour the concoction back and forth from cup to pot until it develops thick foam on top4. Sweeten with honey or flower nectar
ပီရှူး နိုင်ငံမှာဆိုရင် ချောကလက်နဲ့ ငရုတ်သီးကိုရောပြီး စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် သောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အစာအိမ်အတွက်ကောင်းတယ်လို့ ပြောစမှတ်ပြုကြသတဲ့ (ဘယ်တုန်းကမှ ငရုတ်သီးနဲ့ ချောကလက် ရောသောက်ရတာ မကြားဖူးရာကနေ ဖတ်ရင်းပိုစိတ်ဝင်စားလာရော) …
Aztecs ဆိုတဲ့ လူမျိုးစုတွေကတော့ (diarrhea) အစာအိမ်လမ်းကြောင်းလို နာမကျန်းဖြစ်မှုတွေမှာ ကုသနိုင်တယ်လို့ တွေးခဲ့ကြပြီး၊ သူ့မှာ ချစ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတယ်လို့လည်း ယုံကြည်ကြတယ်၊ (စာထဲမှာတော့ Sexual desire ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ ရေးထားတယ်၊ ဒါပေမဲ့လည်း ယဉ်ကျေးစွာတွေးရင်တော့ မိမိကို တစ်ဖက်သားက ပိုချစ်လာအောင်ပေါ့ဗျာ၊ ဒါကြောင့်မို့လည်း ချစ်သူများနေ့တွေမှာ ချောကလက် ကျွေးကြတဲ့သဘောဟာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်ကိုပြန်ချစ် လာနိုင်အောင်၊ ချစ်ပြီးသားလူက ပိုပြီးချစ်အောင် ကျွေးတာနေမှာပေါ့…)
Aztecs ဆိုတဲ့ လူမျိုးစု အကြီးအကဲတစ်ယောက်က ဆိုရင် တစ်နေ့ကို ချောကလက်နဲ့ ငရုတ်သီး ရောထားတဲ့အရည်ကို အခွက် ငါးဆယ် သောက်နိုင်သတဲ့ … (ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လို့)
As cacao seeds were worthafortune, drinking chocolate wasaluxury few Aztecs could afford: among them, rulers, priests, decorated warriors, and honoured merchants.According to an Aztec legend, it is the god Quetzalcoatl who brought heavenly cacao to Earth. For this blasphemous act of giving this sacred drink to humans, he was cast out of paradise. Asaresult, chocolate was thought as being the food of the gods, and priests often made offerings of cacao seeds to Quetzalcoatl and other deities.
Cocoa Bean ဟာလူ့ဥာဏ်ရည်ကို တိုးစေလို့၊ အပြိုင်အဆိုင် လိုချင်ကြတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။
Cocoa Bean ကြောင့် စစ်ပွဲတွေများစွာဖြစ်ခဲ့တယ်၊ နိုင်ငံကို ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။
THEOBROMA "CACAO" အပိုင်း ၂